DAAWO VIDEO: Sheekh Umal ‘‘Muqdisho Cid gaar ah ma leh, Cuqdad ma qabo, waana cafiyay Sh. Soomow & kuwa la qalday”! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Sheekh Umal ‘‘Muqdisho Cid gaar ah ma leh, Cuqdad ma...
DAAWO VIDEO: Sheekh Umal ‘‘Muqdisho Cid gaar ah ma leh, Cuqdad ma qabo, waana cafiyay Sh. Soomow & kuwa la qalday”!
Muqdisho (Halqaran.com) – Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa waxaa uu ka hadlay tallaabada lagu joojiyay muxaadaradii uu Axaddii maanta u qorsheeyay in uu ku qabto Magaalada Muqdisho.
Mar uu ka hadlayay kulan soo dhawayn lahaa oo galabta loogu sameeyay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu tilmaamay in uu isagu go’aansaday tallaabada lagu joojiyay muxaadarada.
Sheekh Umal ayaa wuxuu tani ku macneeyay, isagoo diidanaa in wax dhiig ah uu ku daato qabashada muxaadarada, oo ujeedkeedu uu ahaa in uu ugu nasteexeeyo Madaxda Soomaalida.
Isagoona tilmaamay in Magaalada Muqdisho uu kula kulmay Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, isla-markaana uu qaatay in uu jeediyo muxaadarada uu ugu nasteexeenaayo Siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Sheekh Umal ayaa ku celceliyay in uu gebi ahaanba uu ka tanaasulay jeedinta muxaadaradaasi, isla-markaana aanu dalka u baahnayn mucaarad iyo is qabqabsi dambe.
Halka hoose ka daawo Muuqaalka Sheekh Umal oo dhammeystiran:
iyo kuwa la qalday
Muqdisho cid gaar ah ma leh
Sheekh Umal oo cafiyay Sheekh Soomow
axmed November 26, 2019 At 19:24
Culumo, Gabdhahaa Somalidu u bixin jirtey, kuwaan Culumo ma aha,dhibka somaliya ka taagan ,iyagaa qayb ka ah. Umul Xamar ,dad baa sheegtay iyada oo Caasimadii ah, been ha noo sheegigin, Soomow hore uma maqalba, hadab ragaan hala xir xiro, qaska iyagaa wada Shayaadiinta.